Public Kura | » ओभरलोड बोकेको भन्दै व्यवसायीले रोके बेलहिया नाकामा भारतीय मालबाहक गाडी ओभरलोड बोकेको भन्दै व्यवसायीले रोके बेलहिया नाकामा भारतीय मालबाहक गाडी – Public Kura
भैरहवा– भारतीय मालबाहक गाडीका कारण आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै रुपन्देहीका ट्रक व्यवसायीले बेलहिया नाकामा भारतीय मालबाहक सवारी रोकेका छन् । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले भारतीय ओभरलोड बोकेका गाडीका कारण आफूहरुका सवारी खाली बस्नु परेको र नेपालका सडक संजाल भत्किएको भन्दै रोकेको हो ।
क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेर आएका भारतीय गाडीले भन्सार विन्दुमै भारबहान क्षमता मिलान गरी गन्तव्यमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कानून अवज्ञा गर्दै ओभरलोड बोकेका गाडी नेपालका जुनसुकै ठाउँमा निर्वाध चलिरहेका छन् । नियमक निकाय चुप छ । जसले गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको नेपाली व्यवसायी बताउँछन् ।
मालबाहक सवारी साधनको भारबहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका– २०७४ अनुसार भारतबाट ओभर लोड बोकेर आउने गाडीले भन्सार विन्दुमै भार क्षमता मिलान गरी सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ओभरलोड बोकेर आउने भारतीय गाडीको भार क्षमता मिलान हुँदैन । ‘यस्ता गाडी निर्वाध नेपालमा चल्छन्’, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष अर्जुन भुसालले भने, ‘नेपाली व्यवसायीलाई एउटा नियम लगाउने र भारतीयलाई अर्कै नियम हुन्छ र ? होइन भने किन भार क्षमता मिलान नगरी छाडिन्छ ?’
नियमअनुसार नेपालमा चल्ने मालबाहक ६ चक्के गाडीले ९.६, १० चक्केले १६.२, १२ चक्केले २१, १४ चक्केले २५ र १८ चक्केले ३० टन बोक्न पाउँछन् । यही व्यवस्था अनुसार नेपालको सडकमा समेत बढीमा ३० टन बोकेका सवारी गुड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भारतीय एउटै सवारीले ९६ टनसम्म सामान बोकेर आउने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले नाकामा ओभरलोड गाडीलाई अधिकतम एक हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना काटेर छाड्ने गरेको छ । जरिवान काटेकै भरमा नेपालभर निर्वाध चल्न दिइँदा नेपाली व्यवसायी फुर्सदिला भएका हुन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को नियमावली ५४ मा पनि सवारीको भारबहन क्षमता अधिकतम ३० टन हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो छ । ‘भारतीय मालबाहक गाडीलाई जरिवानाकै भरमा नेपालमा निर्वाध चल्न दिने तर नेपाली मालबाहक गाडीलाई ३० टनभन्दा बढी बोक्न रोक लगाउने । यो कस्तो नियम ?’, भुसालले प्रश्न गर्दै भने, ‘की नेपाली गाडीले मात्रै सडक विगार्छन् भन्न पर्यो, होइन भने भारतीय गाडीको ओभरलोड नियन्त्रण गर्न पर्यो ।’
ट्राफिक प्रहरीकाअनुसार अधिकांश भारतीय गाडी ओभरलोड बोकेर नेपाल आउने गर्छन् । ‘यस्ता कतिपय गाडीलको भारबहन क्षमता मिलान गर्ने गरिएको छ । तर, अधिकांश कच्चा पदार्थ बोकेका गाडीको भार क्षमता मिलान गर्नै कठिन छ । त्यसैले हामीले ५ सयदेखि एक हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना काटेर छाड्छौं’, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका निमित्त प्रमुख दामोदर मल्लले भने, ‘ओभरलोड रोक्न की भन्सार विन्दुमै भारमिलान गर्नुपर्छ, कि त भारतबाट ल्याउँदा नै क्षमताअनुसार ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले सरकारको दोहोरो चरित्रले नेपाली ट्रक व्यवसायी मर्काम परेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली व्यवसायीलाई मारेर भारतीयलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको छ । होइन भने नियम किन हामीलाई मात्रै लाद्ने ? भारतीय गाडीको हकमा पनि हामीलाई जस्तै कडाई गरिनुपर्छ ।’
ओभरलोड ल्याउन पाएपछि नेपाली गाडीमा उद्योगी–व्यवसायीले सामान ओसार्दैनन् । ‘जरिवानाकै आधारमा भारतीय गाडीलाई ओभरलोड बोक्न दिइँदा एकातर्फ सडक ध्वस्त भएका छन् भने नेपाली व्यवसायीले काम नै नपाउँदा खाली ट्रक थन्क्याएर राख्नु परेको छ’, रानाभाटले भने, ‘भन्सारमै भारमिलान भए नेपाली गाडी खाली बस्नु पर्दैन्थ्यो । भार मिलान गर्दा सामान हाम्रा गाडीले पनि बोक्थे । त्यसैले नेपाली र भारतीय सवारीलाई एउटै नियम बनाई ओभरलोड नियन्त्रणमा कडाइ गरिनुपर्छ ।’
व्यवसायीले भन्सार विन्दुमै भारवान क्षमता मिलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । भन्सारले भने आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनले ओभर लोड हेर्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत तीर्थराज पासवान भन्छन्, ‘नियममै नभएको काम हामीले गर्ने होइन, ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने प्रहरी–प्रशासनले हो । यदि अर्थमन्त्रालयबाट भन्सारले ओभरलोडलाई भारबहन क्षमता मिलान गर्नु भन्यो भने हामी गर्छौं । नत्र नियममा नभएको काम हामीले गर्न मिल्दैन ।’
समितिको अवरोध पछि भन्सार पास भएका सयौं गाडी बेलहिया नाका (बाइपास) सडकमा रोकिएका छन । खाद्यान्न, उद्योगका कच्चापदार्थ बोकेका गाडी दुई दिनदेखि यही रोकिएका हुन् । प्रशासनले यसबारे खासै समन्वय गरेको छैन । अवरोध पछि बेलहियाबाट भैरहवातर्फ र बाइपास सडकमा दुवैतर्फ गाडीको जाम लागेको छ ।